Akụkọ - Uru nke Calcium Fluoride - oghere na windo CaF2
Window iko silica/quartz ejiri
Nkọwa nke Corner Cube
Prism na -agbasasị
Prism nke Penta
Prism n'akuku aka nri
Mgbaji Ugboro abụọ
650nm warara bandpass nyo
850nm warara bandpass nyo
940nm warara bandpass nyo
LP 420nm nyo
LP 450nm nyo
LP 470nm nyo
LP 550nm nyo
LP 630nm nyo
LP 780nm nyo
Obere ngafe nzacha
470nm obere ngafe ngafe
550nm obere ngafe nzacha
900nm obere ngafe ngafe
Uru nke Calcium Fluoride - oghere na windo CaF2
Enwere ike iji Calcium Fluoride (CaF2) maka windo anya, oghere, oghere na oghere na Ultraviolet ruo mpaghara Infrared. Ọ bụ ihe siri ike, na -adị okpukpu abụọ karịa Barium Fluoride. Calcium Fluoride ihe eji eme ihe na-acha uhie uhie na-eto site na iji fluorite nke a na-egwupụta, n'ọtụtụ buru ibu na ọnụ ala dị ala. A na -ejikarị akụrụngwa emebere kemịkal maka ngwa UV.
Ọ nwere ndebiri ntụgharị dị ala nke na -enye ya ohere iji ya na -enweghị mkpuchi mkpuchi mgbochi. Window Calcium Fluoride nke nwere ihu na -egbu mara mma kwụsiri ike, ọ ga -adịgidekwa ọtụtụ afọ n'okpuru ọnọdụ nkịtị ruo mgbe okpomọkụ ga -agbago ruo 600 Celsius C mgbe ọ malitere ịdị nro. N'ọnọdụ akọrọ, ọ nwere oke okpomọkụ ọrụ 800 ° C. Enwere ike iji windo Calcium Fluoride dị ka kristal laser ma ọ bụ kristal na -achọpụta radieshon site na iji ihe ụwa na -adịghị ahụkebe dabara ya. Ọ bụ kristal siri ike nke nwere kemịkal na anụ ahụ nwere ezigbo mmiri na -eguzogide, kemịkal na -eguzogide ọgwụ na njiri ọkụ. Ọ na-enye mmịpụta dị ala yana nnyefe dị elu sitere na Vacuum Ultraviolet 125nm ruo Infra-red 8 microns. Mgbasa ngwa anya pụrụ iche pụtara na enwere ike iji ya dị ka oghere achromatic yana ihe ngwa anya ndị ọzọ.
Njirimara ndị a niile na -agba ume ka ejiri ya na mbara igwe, foto, microscopy, ngwa anya HDTV na ngwa ịgwọ ọrịa laser. Enwere ike imepụta windo Calcium Fluoride site na ikuku ikuku ultraviolet ọkwa Calcium Fluoride nke a na -ahụkarị na sistemụ onyonyo ikuku jụrụ oyi. Ebe ọ bụ na ọ kwụsiri ike n'anụ ahụ na enweghị ike kemịkalụ, ọ bụ ihe nhọrọ maka microlithography na ngwa ngwa anya laser. Enwere ike iji anya anya Achromatic Calcium Fluoride na igwefoto na teliskop iji belata mgbasa ọkụ yana na ụlọ ọrụ mmanụ na gas dị ka ihe dị na nchọpụta na ihe nlele.
Oge ezipụ: Aug-02-2021